Dowladdaha Somaaliya iyo Turkiga oo Heshiis Kala Saxiixday (Akhri) – Radio Daljir
Dowladdaha Somaaliya iyo Turkiga oo Heshiis Kala Saxiixday (Akhri)
Oktoobar 6, 2017 9:32 b 0
Heshiiskaan laba geesoodka ah ay kala saxiixdeen Wasaaradaha Beeraha Somaaliya iyo Turkiga ayaa waxaa waxuu ku saabnsan yahay wax soorka soomaaliya sidii sare loogu qaadi lahaa isla markaana qudaaarta laga soo saaro dalkeena loo kobcin lahaa.
Labada dowladood ayaa waxaa heshiiska u kala saxiixay Saciid Xuseen Ciid Wasiirka Wasaarada Beeraha Dalka, halka dowladda turkiga u saxiixay Dr Ahmet Eşref oo Wasiirka Beeraha Turkiga.
Heshiiskan ayaa irdaha u faraya iskaashi buuxa oo labada dal ay ka yeeshaan dhinaca beeraha,iyadoo uu xoojanayo taageero dhinac walbo ay dowlada Turkiga ay ku baxiso Beeraha Soomaaliya sida dhanka tiknooljiyada ee beeraha dib u dhiska kaabayaasha Abuurka iyo waaxda badbaadada beeraha sidii gacan looga siin lahaa dowladda soomaaliya.
Qodobada muhiimka ah ee ku jira heshiiska ayaa waxaa ka mid ah sidii ganacsiga wax soo saarka beeraha ay iska kaashadaan labada dal.
Dhinca kale Wafdiga uu hohaaminayo Wasiirka Beeraha iyo Waraabka Dowladda federaalka Mudane Saciid Xuseen Ciid ayaa booqday Xarunta Cilmi baariska, Sheybaarka iyo tababarada beeraha ee Wasaarada beeraha Turkiga.
Somaaliya oo Xubin Buuxda Kanoqotay Hay’aada Dalxiiska Aduunka u Qaabilsan QM (dhegayso)
Dowladda Jarmalka oo Somaaliya ka Caawinaysa dhinaca Amaanka